Mushaarka ugu hooseeya oo hoos loo sii dhigo shaqo ma u abuureysaa dadka Sweden ku cusub? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mushaarka ugu hooseeya oo hoos loo sii dhigo shaqo ma u abuureysaa dadka Sweden ku cusub?
La daabacay onsdag 24 februari 2016 kl 12.11
Waxaa jira talo dood badan dhalisay oo ah in haddii soogalootiga dalka ku cusub mushaaraadkooda hoos looga sii dhigo heerka mushaar ee ugu hooseeya ay markas shaqo heli karaan qaar badan oo ka mid ah dadyowgan waddanka ku cusub.
Fikirka noocaas ah dadka gadaal ka riixaya waxaa ka mid ah Lars Calmfors oo ah caalim dhaqaalaha ku taqsusay ahna guddoomiyaha ururka Arbetsmarknadsekonomiska Rådet, AER oo ah urur ukuur-gala siyaasadda suuqada shaqada iyo mushaaradka.
Waxaan ogsoonahay haddii shaqo baxiyaha qarasha mushaaraadka ugu baxa uu yaryar ay markas faa’ido ugu jirto in uu qorto shaqaale dheeraad ah.
Ururkeena arbetsmarknadsekonomiska Rådet waxaa dib u hubin ku sameeyey daraasadaha arrimahan la xiriira, inkastoo waxtarka uusan sidaas u buurneyn hadana waxaa jira waxtar uu u leeyahay mushaarka ugu hooseeya oo hoos loo sii dhigo dadyowga fursadahooda suqa shaqada uu yaryahay, ayuu yeri.
Sweden ma jiro sharci go’aaminaya heer ay tahay in uu ahaado mushaarka ugu hooseeya ee la yiraahdo minimilön, balse waxaa go’aamiya heshiiska wado jirka ah ee la yiraahfo Kollektivavtal, una dhaxeeya qaybaha kaloduwan ee suuqa shaqada oo kalo ah ururada matala iskaashatada iyo shaqobaxiyaasha. Markastana waxay ku xiran tahay da’da shaqo qaataha iyo waayo aragnimadiisa xirfadeed.
Hoos loo dhigo boqolkii 25
Lars Calmfors ayaa aaminsan haddii laga dhimo boqolkii 25 heerka mushaar ugu hooseysa ee la siiyo tusaale qofka ka tirsan ururka iskaashatada goobaha ganacsi ay markas u abuureyso shaqooyin dodyowga aqoontooda hooseyso aan laheyn waayo arganimo xirfadeed.
Laakiin dadyowgan ayey maanta aad raqiis u tahay in shirkadahu shaqaaleeyaan maadaame ay jiraan taakulooyin dhaqaale iyo canshuur dhis ay dowladda ku saaciddo. Tusaale qofka waqti dheer shaqo la’aan ahaa haddii shirkad shaqaaleysa, mushaarkiisa boqolkii 80-90 waxaa baxiya dowladda.
Lars Calmfors ayaa la weydiiyey, mar haddii ay jiraan fursadahan oo ay maanta raqiis tahay shaqaaleynta dadyowgan, sabab u doonaysaa in aad dhinto mushaarkooda?
Ma u muuqato si wanaagsan in ay shaqeyneyso shaqooyinka kaalmada ah. Waxtar weyn ayaga xataa ma leh. Sabab kalena waxay tahay hanaankan waa mid dadyowga waqtiga dheer shaqo la’aan ahaa furta ku muuqaya oo ka dhigaya koox dhib ku ah bulshada. Midda kalena layskuma hubo inta kalmooyinka shaqada in ay sii jirayaan, waano haanaan dhib badan fahamkiisa.
Laakiin Maxamed Abshir Sabriye oo Sweden ku sugan shan sanno iyo bar ayaa gebi ahaanba ka soo horjeeda firkirka noocaan ah, isagoo ku tilmaamay firkir cunsuriyeyn iyo takoorid ah.
Fikrika noocaas ah waan ka so horjeedaa. Waa fikir cunsurinimo iyo cadaalad daro ah.